I-NETFLIX'S AFAL AFFAIR IYA KUSETA INGQONDO YABABUKELI KWI-PSYCHE! I-NIA LONG KUNYE NE-OMAR EPPS NGASEMVA KWESIKRINI - IINKQUBO ZETV
Ngokukhawuleza nje ukuba itreyila yomdlalo wefilimu weNetflix wakutshanje uFatal Affair wakhululwa ngoJuni, abalandeli kwimidiya yoluntu babenesifo. Kuba
Ngokukhawuleza ukuba i-trailer ye-Netflix yamuva Umcimbi obulalayo kukhutshwa ngoJuni, abalandeli kwimidiya yoluntu babenesifo. Ngenxa yokudityaniswa kwamabali aseHollywood uNia Long kunye no-Omar Epps, kubandakanya nomkhondo owawudlala iJoe's All The Things (Indoda Yakho Ayizukuyenza) yayiyifomula yokuphumelela i-90's nostalgia.
I-Netflix's Fatal Affair Stars Nia Long kunye ne-Omar Epps yeXesha lesiThathu kwiscreen
UPete Sullivan uqondisa i-movie, iFatal Affair. Inenkwenkwezi eyomeleleyo ebandakanya uNia Long, Omar Epps, KJ Smith, nabanye abaninzi. Kwaye le bhanyabhanya ikwaphawula ixesha lesithathu xa iLong kunye nee-Epps zizokwabelana ngescreen esinye.
Ixesha elide kunye nee-Epps ngaphambili babesebenza kunye kwiscreen ngo-2004 eAlfie. Kwaye ngo-1999 kwi-movie kwi-Too Deep.
Icebo lokuBulala eliBulalayo kunye nokunye okungakumbi kokwazi
Kuyavunywa, Umcimbi obulalayo Unomxholo webali esiwubonileyo kakhulu. Abanye baya kuthi rhoqo. Umtshato wegqwetha elisebenza nzima u-Ellie umtshato wakhe nomyeni wakhe onomdla u-Marcus usemseleni, ke yena uyashibilika kwaye abe nokuthandana okufutshane no-David, owayengumhlobo wasekholejini owayebonakala ngesiquphe ebomini bakhe. Kodwa kungekudala uyayeka ulwalamano lwabo. UDavid akayikuqonda oko kwaye ubudlelwane bungqina ukuba IMICIMBI YOKUBULALA .
Ngaba unokuqikelela? Ewe, kodwa imovie isethwe kwindawo ephefumlayo yeSan Francisco Bay kwaye ikunike ebalulekileyo umona wendlu yaselwandle.
Babecinga ngantoni ababhali?
Kudala, (umvelisi kwifilimu) utyhile ukuba xa ababhali beza nombhalo wakhe Umcimbi obulalayo. ( ibhalwe ngu-Peter Sullivan kwaye up-and-comer Rasheeda Garner) yabhalwa yabamhlophe. Kodwa ngaphambi kokuba angene kwisivumelwano sokukhokela, esazi ukuba amazwi amnyama ngakumbi ayafuneka ngaphambili nangasemva kwekhamera, umdlali weqonga wayefuna ukuqinisekisa ukuba nje kunene.
INetflix kunye nabavelisi basikhuthaze isigqibo kwaye baqala ukwenza uhlengahlengiso kwiskripthi ukuze ibonakale ngathi lilizwi lam, kwaye kukho izinto ezininzi esizenzileyo ukubandakanya ukuba ndingubani emva koko ukubandakanya nabanye abadlali, utshilo. Oko kum kuthi izitudiyo zamkele yonke into eziyifunayo ukubamba ukungafani kobuntu phambili. Into oyibonayo ngoku ngabadlali abamhlophe besixelela, 'Heyi mamela, andizukuyenza i-voiceover yomlinganiswa oMnyama. Ndingumntu omhlophe. Ndizokwehla ndize ndiyeke umntu omnyama ayidlale. ’Lowo ngumzuzu wabo kunye nebango labo lokudlala loo mntu.
Ewe, i-flick iya kuba yinto emangalisayo, kunye ne-cast enkulu, kunye nabalawuli abanamava kunye nabavelisi.
Ukukhutshwa komhla wokuhlaselwa kwixesha lesibini le-titan
Ngaba kuya kubakho enye imovie ye-cloverfield
umhla wokukhutshwa meg
Ngu-3 odibanisa kwi-netflix
eyona 2015 xbox 360 imidlalo
nini ixesha elizayo lehaikyuu